China Fireproof alimina vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika sy mpamatsy | Jixiang
Fampisehoana miavaka momba ny vokatra:
1. Manana fanoherana afo sy faharetan'ny lelafo izy ary afaka mandalo tsy tapaka ny fenitra takiana nasionaly GB8624 "fomba fanasokajiana ho an'ny fanatanterahana ny fananganana fitaovana", ary ny fampiroboroboana azy dia tsy ambany noho ny haavon'ny B1;
2. Ny tanjaky ny peel ambony sy ny toetra mekanika tsara, mahafeno ny fepetra iraisam-pirenena amin'ny takelaka plastika vita amin'ny plastika GB / t17748;
3. Ny fizotran'ny fotodrafitrasa dia manana fahaiza-mampifanaraka matanjaka, saika tsy manova ny fepetra fanodinana extrusion an'ny takelaka plastika tsotra-plastika, izay afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny làlan'ny famokarana takelaka plastika vita amin'ny plastika any an-trano sy any ivelany;
4. Ny akora fototra dia manana fananana be antitra oxygène mafana ary mahazaka hafanana ambony sy ambany - 40 ℃ - + 80 ℃ mandritra ny tsingerina 20 tsy misy fiovana;
5. Ny retardant mirehitra ao anaty akora fototra dia misy fahamarinan-toerana tsara, tsy misy fifindra-monina sy orana ary mahatohitra ny toetr'andro, izay mandresy ny lesoka amin'ny hazon-damosina halogène tsotra izay tsy mahazaka hazavana ultraviolet, noho izany dia mety tsara amin'ny anatiny sy ivelany ravaky ny mari-trano;
6. Ny votoatin'ny vokatra dia fotsy na fotsy fotsy fotsy, ary azo ampifanarahana amin'ny loko hafa;
7. Ny fotokevitra fototra dia ny retardant mirehitra tontolo iainana sy fitaovana madio, tsy misy halogen ary setroka ambany. Tena sarotra ny may. Ny habetsahan'ny setroka dia tena kely rehefa may, ary tsy misy gazy manimba sy setroka mainty. Tsy misy fandotoana izany ary mahafeno ny fepetra takian'ny fanjakana amin'ny fitaovana fananganana maintso sy fiarovana ny tontolo iainana.
Izy io dia mety amin'ny rindrina ambainy sy ravaka anatiny sy ivelany miaraka amin'ny fepetra fiarovana avo lenta.
Previous: Art miatrika takelaka plastika vita amin'ny aliminioma
Manaraka: Nano manadio tena lovia plastika aluminium
Antibakteria sy antistatika alimo plastika plastika ...